Aqalka cad ee Maraykanka oo ku kala qaybsan arrinta Quddus | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Aqalka cad ee Maraykanka oo ku kala qaybsan arrinta Quddus
Washington-DC-(SONNA)-War kasoo baxay Aqalka cad ee Dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in ayan jirin qorshe laysku raacsan yahay oo safaaradda Maraykanka ee Talaviv loogu rarayo Magaalada barakaysan ee Qudus.
Aqalka cad ee looga arrimiyo Waddanka Maraykanka ayaa meesha ka saaray in ku dhawaqista Madaxweyne Donald Trump ay la micno tahay in maamulkiisa uu ka baxayo wada hadalladii uu ka waday Bariga dhexe.
Afhayeenka Aqalka Cad ee Maraykanka , Sarah Haka Bisandares, ayaa sheegtay in Madaxweynaha ay ka go’antahay inuu sii wado wada xaajoodkii u dhexeeyay Falastiin iyo Israa’iil, mana jirto bay tiri Dowlad kale oo ku raacsan qorshahaasi.
Waddamada saaxiibka dhow la ah Maraykanka qaarkood ayaa ka hor yimid qorshahan uu garwadeenka ka yahay Madaxweyne Trump, iyadoo ay durbaba soo baxayaan diidmo ka imaanayso xubno ka mid ah Aqalka cad iyo xisbiyada Dalka Maraykanka.
Previous articleR/Wasaare ku xigeenka XFS oo lagu soo dhaweeyey Addis-Ababa
Next articleRabshado xoog leh oo ka socda Qudus iyo Falastiiniyiinta oo gubey calamada Mareykanka iyo Israel+Sawirro